Wadahadaladii nabadeed ee Galkacyo oo baaqday. – Radio Daljir
Wadahadaladii nabadeed ee Galkacyo oo baaqday.
Diseembar 26, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Dec 26 – Waxaa maanta dib dhac ku yimid shir nabadeed oo la doonayey in xal waara looga gaaro iska-horimaaddadii labada maalmood ee isku xigay ka dhacay agagaarka suuqa weyn ee magaalada Galkacyo.
Shirkaan oo loo qoondeeyey maanta in uu si rasmi ah uga furmo magaalada Galkacyo gaar ahaan iskuulka ummadda ayaa baaqday kadib markii guddiyadii shirkaasi ay ku mashquuleen kulamo dhaxdooda ah oo ay kaga arrinsanayeen waxyaabaha ay iska soo hor fariisan doonaan.
Duqa magaalada Galkacyo ee maamulka Puntland C/raxmaan Maxamuud X Xasan, oo u warramay idaacadda Daljir ayaa sheegay in aysan jirin wax dhibaato ah oo sababay baaqashada shirkaasi, hase ahaatee uu u baaqaday diyaar garoaw xagga guddiyada ah oo ay ku wali ku guda jiraan guddiyadii labada dhinac ahaa ee loo xilsaaray in ay lafo-guraan sidii loo soo afjari lahaa colaadda magaalada Galkacyo.
Duqu waxaa uu intaasi ku daray maalinta berri ah in uu si rasmi ah u bilaaban doono shirkaasi, waxaa kaloo uu sheegay in uu ku han weyn yahay in is afgarad buuxa laga gaari doono dhammaan wixii ka dhacay gudaha magaalada Galkacyo.
Dadweynaha magaalada Galkacyo ayuu guddoomiyuhu u soo jeediyey in ay illaaliyaan ammaanka iyo nabadda magaalada kuna kalsoonaadaan waxgaradka iyo cuqaasha loo xulay xil ka gaaridda nabadda magaalada Galkacyo.
Dhanka kale Xuseen Cabdulle Aw-cali oo ah guddoomiyaha maamulka Galmudug ee magaalada Galkacyo oo isna u warramay idaacadda Daljir ayaa sheegay baaqashada shirku in ay tahay arrimo farsamo oo kaliya, laakiin aysan jirin caqbaddo kale oo hor is taagay furitaankiisa.
Xaaladda magaalada Galkacyo ayaa aad u degganayd shalay illaa maanta kadib markii labo maalmood oo hore ay dagaallo ka dhaceen, waxaana si rasmi ah u dhaqan galay heshiis hordhac ah oo tilmaamayey in xabadda la joojiyo iyo sidoo kale in la kala qaado ciidamadii dirirtu ay dhaxmartay.
Mudane ka tirsan golaha deegaanka Galkacyo oo aan ka waraysanay wada-xaajoodka nabadeed ee Galkacyo .